Isku Shaandhayn Lagu Sameeyey Wasiiro Dalka Ethiopia – Rasaasa News
Nov 14, 2011 Isku Shaandhayn Lagu Sameeyey Wasiiro Dalka Ethiopia
Isku shaandhayn kooban oo lagu sameeyey wasiiro ka tirsan dawlada federalka Ethiopia ayuu boos muhiim ah ku lumiyey wasiirkii hore ee wasaarada warshadaha iyo ganacsiga oo ka soo jeeday Degaanka Somalida Ethiopia.
Wasiirkii hore ee wasaarada warshadaha iyo ganacsiga Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayaa lumiyey jagadii wasiirnimo ee uu degaanka Somalida uga hayey dawlada federalka Ethiopia, isla markaasna aan shaqo ka helin dawlada dhexe ee Ethiopia.
Sida ay wararku sheegayaan xafiiska Raysal wasaaraha Ethiopia, ayaa si hoose u kala badalay masuuliyiintii wasaarada warshadaha iyo ganacsiga isaga oo aan war galin dadka isaga ku dhawdhaw, arintaas oo ka yaabisay iyaga.
Wasiirkii warshadaha iyo ganacsiga Cabdiraxmaan Sheekh Axmed iyo ku xigeenkiisii Axmed Tussa ayaa laga qaaday jagooyinkii ay ka hayeen wasaarada.
Sababta looga qaaday xilalka wasaarada ay ka hayeen wali ma cada dawladuna ma ayna sheegin wax sababa ah.
Cabdiraxman Sheekh Axmed, waxaa lagu badalay Kebede Chane oo hor u ahaan jiray madaxa maamulka iyo xafiiska arimaha nabadgaliyada ee degaanka Axmaarada. Cabdiraxmaan waxaa dib loogu celiyey si shaqo looga siiyo dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Axmed Tussa, waxaa lagu badalay Cali Siraj oo hor u ahaan jiray Hayadaha Samafalka [charities] iyo Bulshada Rayadka. Cali Sarja ayaa aad loogu eedayn jiray jagadan hada laga badalay, waxaa iyana khilaaf kala horyimid masuuliyiinta iyo shaqaalaha wasaarada ku xigeenka looga dhigay. Axmed Tussa waxaa laga dhigayaa maamulaha guud ee wakaalada hawlaha maraakiibta iyo xamuulka Ethiopia, wakaaladan oo cusub laguna mideeyey wakaalado dhawra ayna maamulaan gudi ka kooban todoba ruux.
Sababta keentay in isbadal lagu sameeyo wasaarada warshadaha iyo ganacsiga ayaa la isla dhexmarayaa in ay tahay, wasiirka oo ah nin da,a yar lahayn waayo aragnimo ku filan iyo wasaarada ganacsiga oo aad u balaadhan una baahan isbadalo muhiim ah oo dhinaca tignoolajiyada ah.
Degaanka Somalida oo markii ugu horaysay ku yeeshay dawlada dhexe ee Ethiopia labo wasiir, ka dib kolkii heshiiska nabadeed ay saxiixday Jabhada ONLF sanadkii 2010 ayaa maanta candhuuf dib u liqay.
Waxaa xaqiiq ah in ay jiraan wasiiro uu Cabdiraxmaan ka waayo aragnimo badan yahay oo ku jira dawlada dhexe, waayo aragnimo darteed dib looguma celinin degaanka, balse waxaa jira arimo aan muuqan.
Wararku intaas waxay ku dareen in wasaarada warshadaha iyo ganacsiga hawlaheedu tuuran yihiin, safaf dhaadheerana ay ku jiraan ganacsato doonaysa in loo cusboonaysiiyo licena-da ay ku ganacsadaan. Kumbuyuutaradii oo u baahan in la galiyo software cusub oo ay wasaaradu soo gadatay ayaan shaqaynayn, intii ay socotay xaalada xil wareejintu.
Hore waxaa wasaarada warshadaha iyo ganacsiga wasiiro uga soo noqday;
Kassahun Ayale oo ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha 1995 -2001, horena u ahaa madax xafiiska wax soo saarka iyo taakulada ee xafiiska Raysal wasaaraha, eegana u shaqeeya UN-ta.
Girma Birru oo ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha sanahihii December 2002 ilaa iyo September 2010, hada waa ergayga gaarka ah ee Maraykanka u jooga Ethiopia.
Cabdiraxmaan Sheekh Axmed, waxaa uu hore u ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha October 2010 ilaa iyo November 2011. Hore waxaa uu u qabtay xafiiska ka hortaga masiibooyinka iyo wasiirka waxbarashada ee dawlada degaanka Somalida, hada waxaa la filayaa in uu galo golaha wasiirada ee dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Dawlada Dhexe oo Degaanka Somalida Ugu Xoolo Goynaysa 1.3b